Cabdiweli Muudey, Gudoomiye ku xigeenka kowaad ee Gollaha Shacabka
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudoomiye ku xigeenka kowaad ee Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Cabdiweli Ibraahim Muudey ayaa ka hadlay baaqashada kulankii maanta.
Shir Jaraa'id oo uu ku qabtey Muqdisho, ayaa Muudey ku sheegay in wixii maanta ka dhacay xarunta Gollaha shacabka ay ahaayeen wax laga xumaado, isagoo ku eedeeyay Jawaari iyo ku xigeenkiisa 2aad Mahad Cabdalla Cawad inuu mas'uul ka yahay.
Muudey ayaa Madaxweyne Farmaajo iyo Beesha caalamka ugu baaqay inay baaraan fowdadii maanta ka dhacday Gollaha Shacabka, islamarkaana ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan gudoomiye Jawaari iyo Mahad Cawad.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa tilmaamay in Ciidamo lagu qabsaday xarunta, kadibna laga hor-istaagey Xildhibaanada inay gutaan waajibkooda dastuuriga ah, kana doodaan Mooshinka ka dhanka ah Jawaari. Halkan ka akhri Warbixinta.
Hadalka Muudey ayaa yimid kadib markii uu maanta baaqday Kulan laba ajande ah oo labo garab oo Xildhibaanno ah, oo katirsan Gollaha shacabka ay yeelan lahaayeen, kaasi oo qalalaase dhacay u baaqday.
Sabtidii lasoo dhaafay, Madaxweyne Farmaajo ayaa baajiyay isla kulankan, kadib markii laga baqay inay dhibaato dhacdo, maadaam dhinacyada ay kala iclaamiyeen labo ajande oo iska soo horjeeda.
Muudey iyo Jawaari ayaa midna ku guuleysay inuu qabsado kulanka uu rabey maanta, waxaana Khilaafka Siyaasadeed yeelanayaa waji cusub, iyadoo laga yaabo in beesha caalamka soo farageliso.
Guddi cusub oo loo magacaabay Weerarkii Guriga Cabdi Qeybdiid [DAAWO]
Soomaliya 24.03.2018. 19:00
Xildhibaanada taageersan Jawaari oo Digniin culus soo saarey [Dhageyso]
Soomaliya 09.04.2018. 01:48